Izindaba - Kungani indololwane yakho ingakhululekile?
Abangani abathanda ukudlala ithenisi, i-badminton ne-table tennis bazolimaza izindololwane uma bedlala ibhola, ikakhulukazi uma bedlala i-backhand. Ochwepheshe basitshela ukuthi lokhu kuvame ukubizwa ngokuthi "indololwane yethenisi". Futhi le ndololwane yethenisi ikakhulukazi isemzuzwini wokushaya ibhola, isihlanganisi sesihlakala asibrikiwe, asikho isihlakala sokuvala, imisipha yokwelula ingalo yeluleke ngokweqile, idale ukulimala kokunamathiselwe. Indololwana eyakhiwe yi-humerus, amathambo aqinile kanye ne-ulna.Ijoyina ingalo ephezulu nengalo engezansi, ihlanganisa ukunyakaza kwengalo ngobuciko nangokuhleleka futhi yenza ingalo igobeke, yelule futhi ijikeleze ukuze yenze ukusebenza kangcono. Kodwa-ke ukusebenza ngokweqile okuphindaphindwayo, ukuzivocavoca ngokweqile, ukuhlukumezeka okungazelelwe, okuholela ekukhathaleni kwethenda, ukuvuvukala kanye nethumba, njenge "indololwane yethenisi" kanye "nendololwane yegalofu". Lokhu kuzophinde kuthinte ukusebenza kwesandla, kuholele ekujikeni kwendololwane okulinganiselwe. Ngaphezu kwalokho, ukulimala kwemisipha yengalo engenhla kuzothinta ukugoba nokuqondisa indololwane.
Ukuhlose imisipha evame ukulimala endololwaneni, umvikeli wendololwane unengcindezi efanelekile yokuvimbela ukusebenza kwamathende alimele futhi anciphise izinga lokulimala okwenziwe ukusikwa ngokweqile. Idizayini yomvikeli wendololwane inganciphisa nobuhlungu futhi igweme ukukhathala, futhi isize umsebenzi wesandla ukuthi uhambisane kahle.
Elbow Brace izici 1. I-Thermotherapy: Ukwelashwa okufudumele nokufudumele komuthi kuyindlela ebaluleke kakhulu yokwelapha amalunga namathambo alimele ngabaqeqeshi abaningi nodokotela bokuvuselela. Umvikeli wendololwane wenziwe ngendwangu yokunwebeka esezingeni eliphakeme, engasondela ngokuphelele kusayithi elisetshenziswayo, ivimbele ukulahleka kwezinga lokushisa komzimba, iqede izinhlungu zengxenye ethintekile, futhi isheshise ukululama. 2. Khuthaza ukujikeleza kwegazi: Ngenxa yokushisa kokwelashwa okugcinwe ngumvikeli wendololwane, khuthaza ukujikeleza kwegazi kwezicubu zemisipha endaweni esetshenziswayo. Lo mphumela uzuzisa kakhulu ekwelapheni isifo samathambo nobuhlungu obuhlangene. Ngaphezu kwalokho, ukuhamba kahle kwegazi kungadlala indima ebaluleke kakhulu ekunyakazeni kwemisipha futhi kunciphise ukulimala. 3.Ukusekela nomphumela wokuzinzisa: umvikeli wendololwane angathuthukisa ukuhlangana nomlenze ukumelana nomthelela wamandla angaphandle. Ukuvikelwa okuphumelelayo kwamajoyini nemisipha.
4. Izinto ezilula, ezinwebeka eziphefumulayo, ezinethezekile ukugqoka, ezinokwesekwa okuhle nokunciphisa ukushaqeka, umshini ogezekayo, olula ukugqokwa, ofanele ukugijima, imidlalo yebhola nemidlalo yangaphandle.
Abanye abantu bathanda imidlalo eyeqisayo, kumele bagqoke izinto zokuzivikela eziqeqeshiwe, ukuze bavikele ukulimala. Ekugcineni, kufanele sikukhumbuze ukuthi amagiya avikelayo adlala kuphela indima ethile yokuzivikela kwezemidlalo, ngakho-ke ngaphezu kokugqoka ezinye izinto zokuzivikela, kufanele sizame ukuqonda ukunyakaza okujwayelekile kobuchwepheshe, ngokulandela imithetho yomncintiswano.